त्रि. वि. को शिक्षा नीति – Kadar News : Oneline Digital News:
त्रि. वि. को शिक्षा नीति
शिक्षामा अप्ठ्यारो, कुनै असफल बनाउने खालका विसंगती नबनोस् । नेपाली दुर्यापतिका पेवा र प्रयोग गराउने संस्था विश्वविद्यालय नबनोस् । त्यस्ताका पदहरुलाई बिद्यार्थी एक भएर निकाला गरियोस् । शिक्षामा स्वतन्त्रता होस् । बाधा, अड्चन नबनोस् । शिक्षा र जागिरको नाममा बलात्कार गराउने, आर्मी लगाउँछु भन्नेहरु अपराधी नहुने ? समालोचना लेख्ने अपराधी हुने ? त्यसैले यो चरम यातना दिनेलाई उच्च पद दिने विश्वविद्यालयको मनपरीतन्त्र कहिलेसम्म हो ? त्यसैले सरकारलाई चेतना छ त्यस्ताहरुको पद तुरुन्तै खोरेजी होस् । नाता–पाता र अरु दलालीहरुलाई आश्रय दिएर आज हामी असुरक्षित छौं । त्यसैले आज जताततै बलात्कारी लाई आश्रय दिएको पाइन्छ ।
लेखक : तिलकुमारी शर्मा (बस्याल)
प्रकासित : १७ चैत्र २०७६, सोमबार २१:०६
शिक्षा कसरी स्वतन्त्र छ, यहाँ शिक्षामा विकृति, विसंगति वाहेक के छ ? वास्तवमा शिक्षामा चरम राजनीतिले गर्दा यहाँ ठूला भनाउँदाहरुको हातमा राजनीति गुज्रिरहेको छ । एज्म् जस्तो उच्च तहमा कोटा छुट्याउने र सवल बिद्यार्थीलाई पछि पारी भ्न्इ को राजनीति गर्ने यी ठूला वा साना सबैलाई राज्यले नहेरी पदको जिम्मेवारी दिएको छ । अझ त्यति मात्र हो र डिन जस्तो ठाउँमा बसेर चरम राजनीति गर्ने र द्धन्द्धकालको पिडामा नुन–चुक छर्ने दलालहरु अझ माओवादी भन्दै पदग्रहण गराउने र गर्ने अनी एमाले भनि छनोट गर्ने र काँग्रेस बनी बोकाको सिकार बनाउने चरम राजनीति कहिले सम्म हो सरकार ? यो शिक्षा सहि छ त सरकार ? नक्कलीहरु भित्र पसेर सक्कलीलाई नक्कली बनाउन कालो बजार गर्ने विश्वबिद्यालयका केही डिनहरु छन् । के यो सही हो ? बर्षौभरी ऋणका सिकार बनेर बसेका बिद्यार्थीका सक्कललाई नक्कली भन्ने ? शिक्षामा के यथार्थ निष्पक्ष छ होला ? मैले डिनलाई भेटेर सोधे ।
विश्वबिद्यालय उनीहरुका श्रीमतीको पेवा नबनोस् । “कति भन्न आउँछन् नगरिदिनु भन्छु । धेरैबोले आर्मी लगाउछु” भन्ने दुर्योपतिहरु नेपालमा चेलीका इज्यतमाथि धावा बोलेकाछन् । के कति सही र निष्पक्ष छन् ? हामी दुर्योपति जस्ता पाँचवटा श्रीमान् घरमा राख्ने र चेलीलाई आर्मी लगाउने नक्कली महिला हैनौं । सक्छौ भने सरकार तिनका पद तुरुन्त खारेज गरियोस् । यो सबैको साझा संस्था हो । बिद्यार्थी असफल बनाउने दुर्योपति र दलालहरु नै हन् ।
त्यसैले शिक्षा कसैका दुर्योपति जस्ता श्रीमतीरु बाट ज्बलमभि गर्ने पेवा नबनोस् । जति धेरै कोटा दियो त्यति नै समस्या भयो भनेर रोक्ने पाखण्डीहरु जस्तालाई हस्तान्तरण नगरियोस् । शिक्षा केवल अनियन्त्रित हुनुपर्दछ । शिक्षामा हैन बरु होटेल, लजमा नराम्रो पेशा गर्नेलाई नियन्त्रण होस् । विभागदेखि डीनसम्म शिक्षामा मनोमानी नहोस् । बिद्यार्थीका शैक्षिक क्रियाकलाप रोक्ने, राजनीति गर्ने र दमन गर्ने प्रध्यापक, कर्मचारी र डिन र अन्यलाई प्रमुख नबनाइ योस् । राजनीति प्रयोग गर्ने जो सुकै अवसरवादीलाई सजायको भागिदार गरियोस् । यदि त्यस्तो सजाय हुँदैन भने हामी मर्न डराउँदैनौ । त्यसैले आउँदा दिनहरुमा एज्म् लाई अप्ठेरो बनाउने र रोक लगाउने, हातका कलम खोस्ने, लेख्ने पेशालाई नबुझी अपराधी बनाउने असभ्य प्रध्यापकहरु र डीनहरुलाई पनि कारवाही होस् ।
ति दलालहरु जसले आफ्नै भाउजु बुहारीदेखि अरु चेलीसम्मलाई बिछिप्त बनाएर राज्यको सम्पत्ति माथि रजाई र भ्रष्टाचार गरेका छन् । त्यसैले शिक्षा कसैका दुर्योपति जस्ता श्रीमतीरु बाट ज्बलमभि गर्ने पेवा नबनोस् । जति धेरै कोटा दियो त्यति नै समस्या भयो भनेर रोक्ने पाखण्डीहरु जस्तालाई हस्तान्तरण नगरियोस् । शिक्षा केवल अनियन्त्रित हुनुपर्दछ । शिक्षामा हैन बरु होटेल, लजमा नराम्रो पेशा गर्नेलाई नियन्त्रण होस् । विभागदेखि डीनसम्म शिक्षामा मनोमानी नहोस् । बिद्यार्थीका शैक्षिक क्रियाकलाप रोक्ने, राजनीति गर्ने र दमन गर्ने प्रध्यापक, कर्मचारी र डिन र अन्यलाई प्रमुख नबनाइ योस् । राजनीति प्रयोग गर्ने जो सुकै अवसरवादीलाई सजायको भागिदार गरियोस् । यदि त्यस्तो सजाय हुँदैन भने हामी मर्न डराउँदैनौ । त्यसैले आउँदा दिनहरुमा एज्म् लाई अप्ठेरो बनाउने र रोक लगाउने, हातका कलम खोस्ने, लेख्ने पेशालाई नबुझी अपराधी बनाउने असभ्य प्रध्यापकहरु र डीनहरुलाई पनि कारवाही होस् । आफुहरुले सारेर लेख्छन्, विदेशी लेखकका र विद्यार्थीलाई सामान्य भाषामा लेख्ने सहयोगी पुस्तकलाई रोक्ने र ईज्यत नदिन खोज्ने र आफ्ना किताव किन्दैनन् भनेर अरुलाई रोक्न हात निमोठ्न खोज्ने दलालहरुलाई र बिदेशसम्म पछि लाउन खोज्ने र उनीहरुको नियन्त्रणमा राख्न खोज्ने आफन्त र अन्यलाई कारवाही
होस् । बिद्यार्थीको समस्याबाट टाढा भागेर उम्कन खोज्ने प्रध्यापक र अरुको शोषण गर्ने लाई दह्रो कारवाही होस् । हात रोक्न र मुख छेक्न खोज्नेहरुलाई कारवाही होस् । सत्यतासँग डराउनु नपरोस् ।
शैक्षिक विश्वबिद्यालयदेखि डीनसम्मका माफियाहरुलाई छानीछानी कारवाही गरौ । पार्टी पिच्छेका मान्छेले पद पाउनका लागि गरिएको षड्यन्त्र किन हुँदैन छ विश्वबिद्यालयमा ? परिवर्तन गर्ने र सत्यता छानबिन गर्ने क्रान्तिकारी होइनन् पद खोज्ने खालका क्रान्तिकारी हुन् । सहन असैय हुन्छ, मृत्यु भन्दा चोट हुन्छ । ति गद्दारहरु चाहे क्रान्तिकारी या अरु जो कोही होस् गल्ती गर्नेलाई कारवाही होस् । आज आफ्नै नातेदार हामीमाथि परेड खेल्नेलाई अतिथि बनाएर सम्मान गर्ने छन् । त्यस्तालाई समाजबाट नै बहिस्कृत गर्नुपर्छ । त्यसैले यहाँ निष्पक्ष शिक्षा हुनुपर्र्यो बिद्यार्थीलाई भौतिक कारवाही बलात्कार गराएर नोकरी र शिक्षा हैन, सही शिक्षा दिनुपर्र्यो । षड्यन्त्र गर्छु भन्ने नर्खरमउलीको जालको पेशा र यौन शिक्षा होइन, नैतिक र अस्तित्वको माया गर्ने शिक्षा चाहिएको छ हामीलाई । केटी साथी हुँदामा सुरक्षा र केटा साथी हुँदैमा असुरक्षा होइन । विवेकशील र नियन्त्रण बिनाको शिक्षा चाहियो । तर आज त्रि.वि.वि. मा अति घिनलाग्दो शिक्षा भइरहेको छ की जो दिनदिनै बिद्यार्थी प्रध्यापकबाट पिडित भएकाछन्, शोषित भएका छन् , बिद्यार्थीका सपनाहरुलाई चकनाचुर पार्न खोजिदै छ । त्यसतर्फ किन ध्यान गएको छैन शिक्षा मन्त्री, भिसी, तथा अन्य सरोकारवाल पक्षको ? प्रश्न गहिरो र तिखो छ । जबसम्म त्रिविविमा त्यस्ता खाले दलालको अन्त्य हुन्न तब सम्म सोझा र अब्बल बिद्यार्थीले अवसर पाउने छैनन् । तिनै दलालहरुको हाली मुहाली रहीरहने छ ।
शिक्षामा अप्ठ्यारो, कुनै असफल बनाउने खालका विसंगती नबनोस् । नेपाली दुर्यापतिका पेवा र प्रयोग गराउने संस्था विश्वविद्यालय नबनोस् । त्यस्ताका पदहरुलाई बिद्यार्थी एक भएर निकाला गरियोस् । शिक्षामा स्वतन्त्रता होस् । बाधा, अड्चन नबनोस् । शिक्षा र जागिरको नाममा बलात्कार गराउने, आर्मी लगाउँछु भन्नेहरु अपराधी नहुने ? समालोचना लेख्ने अपराधी हुने ? त्यसैले यो चरम यातना दिनेलाई उच्च पद दिने विश्वविद्यालयको मनपरीतन्त्र कहिलेसम्म हो ? त्यसैले सरकारलाई चेतना छ त्यस्ताहरुको पद तुरुन्तै खोरेजी होस् । नाता–पाता र अरु दलालीहरुलाई आश्रय दिएर आज हामी असुरक्षित छौं । त्यसैले आज जताततै बलात्कारी लाई आश्रय दिएको पाइन्छ । निर्मलाका लागि आवाज उठ्यो तर खै हामी भित्र भएका दमनका आवाज ? अझ बाहिर टर्चर दिएर भित्र मरेको छ कि भनेर हेर्ने दलालहरुलाई पचास रुपैयाँ, एक सयको लोभ बढेको छ । जहाँ गए त्यही नोकर बनाएर बस्न खोज्नेलाई कारवाही किन हुँदैन ? मन्त्री, र राष्ट्रपतिको पेन्ट र सारीमा लतपतिएका दलालहरुले हाम्रो अतित्व बेचेकाछन् । त्यसैले किन चाहियो राजनीति अनि रगतको साइनो जहाँ शोषण र स्वार्थ हुन्छ भने ? दलाल बलात्कारीलाई मृत्यु दण्डको सजाय राखौं । कलम खोस्नेलाई पनि मृत्यु दण्डको सजाय दिलाऔं । शैक्षिक विश्वबिद्यालयदेखि डीनसम्मका माफियाहरुलाई छानीछानी कारवाही गरौ । पार्टी पिच्छेका मान्छेले पद पाउनका लागि गरिएको षड्यन्त्र किन हुँदैन छ विश्वबिद्यालयमा ?
परिवर्तन गर्ने र सत्यता छानबिन गर्ने क्रान्तिकारी होइनन् पद खोज्ने खालका क्रान्तिकारी हुन् । सहन असैय हुन्छ, मृत्यु भन्दा चोट हुन्छ । ति गद्दारहरु चाहे क्रान्तिकारी या अरु जो कोही होस् गल्ती गर्नेलाई कारवाही होस् । आज आफ्नै नातेदार हामीमाथि परेड खेल्नेलाई अतिथि बनाएर सम्मान गर्ने छन् । त्यस्तालाई समाजबाट नै बहिस्कृत गर्नुपर्छ । त्यसैले यहाँ निष्पक्ष शिक्षा हुनुपर्र्यो बिद्यार्थीलाई भौतिक कारवाही बलात्कार गराएर नोकरी र शिक्षा हैन, सही शिक्षा दिनुपर्र्यो । षड्यन्त्र गर्छु भन्ने नर्खरमउलीको जालको पेशा र यौन शिक्षा होइन, नैतिक र अस्तित्वको माया गर्ने शिक्षा चाहिएको छ हामीलाई । केटी साथी हुँदामा सुरक्षा र केटा साथी हुँदैमा असुरक्षा होइन । विवेकशील र नियन्त्रण बिनाको शिक्षा चाहियो । तर आज त्रि.वि.वि. मा अति घिनलाग्दो शिक्षा भइरहेको छ की जो दिनदिनै बिद्यार्थी प्रध्यापकबाट पिडित भएकाछन्, शोषित भएका छन् , बिद्यार्थीका सपनाहरुलाई चकनाचुर पार्न खोजिदै छ । त्यसतर्फ किन ध्यान गएको छैन शिक्षा मन्त्री, भिसी, तथा अन्य सरोकारवाल पक्षको ? प्रश्न गहिरो र तिखो छ । जबसम्म त्रिविविमा त्यस्ता खाले दलालको अन्त्य हुन्न तब सम्म सोझा र अब्बल बिद्यार्थीले अवसर पाउने छैनन् । तिनै दलालहरुको हाली मुहाली रहीरहने छ ।